ထိုင်ဝမ်၊ ရတနာဝါသကျောင်း၊ မြန်မာနှစ်သစ်ကူး သင်္ကြန်ပွဲတော်တွင် ကျန်းမာ ချမ်းသာ၍ လိုရာဆန္ဒ ပြည့်ဝကြစေရန်၊ ဘေးအန္တရာယ်အပေါင်း၊ ရောဂါအပေါင်းတို့မှ ကင်းဝေး၍ ကျန်းမာ အသက်ရှည်စေရန် ကြွရောက်ပြီး အတူတကွ ကုသိုလ်ပြုလုပ်၍ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ကြရန် မေတ္တာ စေတနာရှေ့ထားကာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
Posted by YATANAVASA at 9:47 AM
Labels: ပွဲတော် ဖိတ်ကြားလွှာ, သတင်း
ဘုန်းကြီးတို့ ငယ်ငယ်တုန်းက အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ် ဖတ်ဖူးတာရှိတယ်။ သူက ဘက်စုံမကြည့်လို့ရှိရင် အမှန်မသိတဲ့အကြောင်းလေး။ ပြဿနာတိုင်းမှာ(၂)ဘက် ရှိတယ်တဲ့၊ အင်မတန် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အချက်ကလေးတစ်ခုပေါ့။
တောင်တုန်းလေးတစ်ခုပေါ်မှာ စားသောက်ဆိုင်ဆိုင်လေးတစ်ခု ဖွင့်ထားတယ်။ အဲဒီဆိုင်လေးမှာ တောင်က လာတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မြောက်က လာတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ် ၀င်ပြီးနားကြတယ်။ လမ်းကြီးက တောင်မြောက်ဖောက်ထားတယ်။ အဲဒီတုန်းကလူတွေ မြင်းစီးတဲ့ခေတ်ဆိုတော့ မြင်းစီးပြီးတော့ သွားကြ လာကြတယ်။ ခြောက်လုံးပူး ခါးချိန်တဲ့ခေတ် မဟုတ်ဘူး၊ ဓားလွယ်, လွယ်တဲ့ခေတ်။
အဲဒီတုန်းကမြောက်ဘက်က လူကြီးတစ်ယောက် ဓားလွယ်နဲ့ မြင်စီးပြီးတော့ လာတယ်။ တောင်ဘက်က လူတစ်ယောက်ကလည်း မြောက်သွားဖို့ မြင်းစီးပြီး လာတယ်။ အဲဒီတောင်ကုန်းလေးကျတော့ ခဏနားကြတယ်၊ တောင်ကုန်းပေါ်အတက်ကလေးမှာ နှစ်ယောက်သား မြင်းပေါ်က ခုန်ဆင်းလိုက်တယ်။ စားသောက်ဆိုင်လေးထဲ ၀င်ပြီးနားကြမယ်ပေါ့။
အဲဒီမှာ မြောက်ဘက်ကလာတဲ့ လူက အပေါ်မော့ကြည့်တယ်။ မော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ သူက ဘာတွေ့တုန်းဆိုရင် ရွှေခြင်္သေ့ရုပ်ကလေးကို တွေ့တယ်။ တွေ့တော့ သူက သြော် ရွှေခြင်္သေ့ စားသောက်ဆိုင်ပဲလို့ ပြောလိုက်တယ်။ အဲဒီလို ပြောလိုက်တဲ့အချိန် တောင်ဘက်ကလူက အပေါ်မော့ကြည့်တယ်။ မော့ကြည့်ပြီး မိတ်ဆွေ ခင်ဗျား မှားနေပြီ၊ ရွှေခြင်္သေ့စားသောက်ဆိုင် မဟုတ်ဘူးဗျာ့။ ငွေခြင်္သေ့စားသောက်ဆိုင်ပါ။
ဒီတော့ မြောက်ကလာတဲ့လူက ခင်ဗျားက ကျုပ်ကို ရွှေနဲ့ငွေ မကွဲဘူးလို့ ပြောချင်တာလား တဲ့။ မကျေနပ်တဲ့အသံနဲ့ မေးတယ်။ ဟိုလူက ခင်ဗျား မှားနေတာပါ။ ရွှေခြင်္သေ့မဟုတ်ဘူး၊ ငွေခြင်္သေ့ပါလို့ ထပ်ပြောတယ်။ အဲဒီ ခေတ်ကတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မကျေနပ်ရင် ဓားချင်းယှဉ်ခုတ်တဲ့ခေတ်။ အချင်းများကြတယ်။ ပထမလူက သူ့ကို ဒီလောက် အထင်သေးရမလား ဆိုပြီးတော့ ဓားဆွဲထုတ်တယ်၊ ဒုတိယလူကလည်း ဓားဆွဲထုတ်တယ်။ ပြီးတော့ ဓားချင်း ယှဉ်ခုတ်ကြတယ်။ တချွမ်ချွမ်နဲ့၊ အဲဒီနေရာမှာ နှစ်ယောက်စလုံး တစ်ဘက်မြင်နဲ့ ဆော်ကြတာလေ။
အငြင်းပွားပြီး ဓားချင်း ဆွဲခုတ်နေကြတုန်း အသံတစ်သံ ထွက်ပေါ်လာတယ်၊ ရပ်လိုက် ဆိုတဲ့ အမိန့်ပေးသံ၊ သူတို့ နှစ်ယောက်စလုံး ကြားတယ်။ သူတို့ အံ့အားသင့်ပြီး ရပ်လိုက်ကြတယ်။ အသံရှင် နတ်သမီးလေး ရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီး ရှင်တို့ ဘာလုပ်နေကြတာတုန်းလို့ မေးလိုက်တယ်။ တို့ဟာ အမှန်တရားအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်လို့ ပြောကြတယ်။ တကယ်တော့ သူတို့အမှန်တရားကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံမြင်ကြတာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်မြင်တာ အမှန်လုပ်ပြီး တိုက်ပွဲဝင်နေတာနော်။
ကဲ . . . ပြောပါဦး ဆိုတော့ မြောက်ဘက်မှ လာတဲ့သူက ပြောတယ်၊ ငါက ရွှေခြင်္သေ့လို့ပြောတယ်။ ဒီလူက ငွေခြင်္သေ့တဲ့၊ ဒီလူက ငါ့ကို ရွှေနဲ့ငွေမကွဲဘူးလို့ ပြောချင်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ငါက အမှန်တရားအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေတာ၊ ဒီတော့ အဲဒီနတ်သမီးက မြောက်ဘက်က လာတဲ့ လူကြီးမင်း တောင်ဘက်သွားပြီးကြည့်ပါ၊ တောင်ဘက်ကလာတဲ့ လူကြီးမင်းက မြောက်ဘက်ကို သွားကြည့်ပါဦးလို့ ပြောလိုက်တယ်။ ရွှေတစ်ဖက် ငွေတစ်ဖက် လုပ်ထားတာကိုး။
ခြင်္သေ့ရုပ်လေးက ဟိုဘက်က ရွှေ၊ ဒီဘက်က ငွေ၊ နှစ်ယောက်စလုံးမှန်တယ်။ နှစ်ယောက်စလုံး မှားနေကြတယ်။ဆိုလိုတာက တစ်ဘက်ပဲ သိတယ်။ အကုန်လုံးမသိဘူး။ ဒီပုံပြင်လေးက တရားဓမ္မနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အလွန်မှတ်သားစရာ ကောင်းတယ်။ တစ်ပိုင်းတစ်စ အမြင်လေးနဲ့ ပြည့်စုံတယ်မထင်နဲ့။
မြတ်စွာဘုရားက နာနာတိတ္ထိယသုတ်မှာ ဟောတယ်။“၀ိဂ္ဂယှ နံ ၀ိဝဒန္တိ၊ ဇနာ ဧကင်္ဂဒဿိနော” အေး . . . လူတွေဟာ တစ်ပိုင်းတစ်စကိုသာ သိပြီး၊ ဆုပ်ကိုင်ထားပြီး အငြင်းပွားနေကြတယ်။ ကိုယ်သိတာလေးကို ဆွဲကိုင်ပြီး အငြင်းပွားနေကြတယ်တဲ့။ အကုန်သိအောင် လုပ်ရမယ်။အကုန်သိရင် အငြင်းပွားစရာ မရှိတော့ဘူးလေ။
ဒီသုတ်ထဲမှာ မျက်မမြင်သူကန်း ဆင်စမ်းပြီး ဆင်သရုပ်ဖော်ခြင်းဆိုတဲ့ ပုံဝတ္ထုလေး ပါတာကို တွေ့ရတယ်။လောကီစာအုပ်တွေထဲမှာလည်း မျက်မမြင် ပုဏ္ဏား(၆)ယောက်အကြောင်း ရေးထားကြတယ်။
အဲဒီပုံပြင်က ဘယ်က စ လာတာလဲ မသိဘူး။ အိန္ဒိယ ဟိန္ဒူဘာသာဖြင့် ရေးထားတဲ့ စာအုပ်မှာတွေမှာလည်း ပါတာပဲ၊ အင်္ဂလိပ်လို ရေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေမှာလည်း ပါတာပဲ၊ မြန်မာလိုလည်း ပြန်ရေးကြတယ်။ ထူးထူးဆန်းဆန်း မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ သုတ္တန်ထဲမှာလည်း တွေ့တယ်။
မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ ဥဒါန်းပါဠိတော်မှာ နာနာတိတ္ထိယသုတ် ဆိုတာ ရှိတယ်။ တိတ္ထိအမျိုးမျိုး အကြောင်းကို ဟောထားတာ။ အဲဒီ နာနာတိတ္ထိယ သုတ်မှာ မျက်မမြင်ပုဏ္ဏား (၆)ယောက်တော့ မဟုတ်ဘူး၊ (၉)ယောက်၊ (၉)ယောက် ဆိုတာ လူကို ပြောတာမဟုတ်ဘူး၊ မျက်စိမမြင်တဲ့ သူတွေကို အုပ်စု (၉)စုခွဲကာ ဆင်ကို စမ်းကြည့်စေပြီး ဆင် သရုပ်ဖော်ခိုင်းတာ။
အဲဒီဇာတ်လမ်းက ဘုရားဟောတဲ့ သုတ္တန်မှာ ဘယ်လိုပြထားသလဲဆိုရင် –
သာဝတ္ထိပြည်က ဘုရင်ကြီးဟာ တစ်ခါတလေ အပျင်းဖြေတဲ့ သဘောပေါ့၊ ရယ်စရာ လုပ်တယ်။ဘာလုပ်တုန်းဆိုတော့ သာဝတ္ထိ ပြည်မှာရှိတဲ့၊ မျက်စိနှစ်ကွင်း အလင်းမရတဲ့သူအားလုံး ဆင့်ခေါ်ခိုင်းတယ်။နန်းရင်ပြင်မှာ စုစေတယ်။ မျက်စိမမြင်တဲ့လူတွေ အများကြီးပဲ ရောက်လာကြတယ်။
ရောက်လာတဲ့အခါ (၉)စုခွဲလိုက်တယ်။ ခွဲပြီးတဲ့အခါ ကျတော့ ဘုရင်က ၀န်းထမ်းတွေကို အမိန့်ပေးတယ်။
အဲဒီ (၉)စုကို တစ်စုစီ ခွဲပြီး တစ်မျိုးစီ ဆင်ကို ပြစေတယ်၊ ဆင်ဆိုတာ ဘယ်လိုလဲ၊ တချို့ကို ဆင့်ခြေထောက်ကို ကိုင်စမ်းပြီးပြတယ်။ တချို့ကို အမြီးကို ကိုင်စမ်းပြတယ်၊ တချို့ကို နှာမောင်းကို ပြတယ်၊ တချို့ကို အစွယ်ကို ပြတယ်၊ တချို့ကို ကိုယ်လုံးကို ပြတယ်၊ အဲဒီလို ခွဲပြီးပြတယ်၊ အမြီးမှာလည်း မြီးဆံလေးကို ပြတယ်၊ တချို့ကို မြီးထူးရိုးကိုပြတယ်။ ခွဲပြီးတော့ ပြခိုင်းတယ်။
အုပ်စုလိုက် ပြပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ ဘုရင်ကြီးက ရှေ့တော်သွင်းတယ်၊ ဘုရင်ကြီးက မေးတယ်။မောက်ကန်းတို့၊ မင်းတို့ ဆင်မြင်ကြပြီလား။ဘုန်းတော်ကြောင့် မြင်ရပါပြီ တဲ့။
ကဲ . . . နံပါတ်တစ်အုပ်စုက ဆင်ဆိုတာ ဘယ်လိုဟောလဲ၊ ပြောပြစမ်းလို့ ဘုရင်ကြီးကမေးတယ်။သူတို့ကို ပြထားတဲ့အတိုင်း သူတို့ပြောတာပေါ့။ဆင့်ကိုယ် စမ်းထားတဲ့လူစုက ဆင်ဆိုတာ အုတ်နံရံကြီးလိုပဲတဲ့။ကျန်တဲ့သူတွေကလည်း ဟိုကြည့် ဒီကြည့်ပေါ့။ မြင်တော့ မမြင်ရဘူးပေါ့။ အံ့သြတယ်။
ငါတို့တွေ့တာ အုတ်နံရံကြီးလို မဟုတ်ပါဘူး၊ တုတ်ချောင်းကြီးလိုပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အစွယ်ပြထားတာကိုး။
မြီးဆံပြထားတဲ့လူက တံမျက်စည်းလိုဟာကြီးပါ။ ခြေထောက် ပြထားခြင်းခံရတဲ့ လူကလည်း ဆင်ဆိုတာ တိုင်လိုကြီးပါတဲ့။
သူတို့အချင်းချင်း တစ်ခုနဲ့တစ်ခု မကျေမနပ် ဖြစ်နေကြတယ်။ ဆင်ဆိုတာ နံရံကြီးလိုဆိုတော့ တံမျက်စည်းလို ထင်တဲ့ကောင်ကဟာ . . . မင်းမှားနေတယ်။ ငါတွေ့တာက တံမျက်စည်းလိုပဲ။ဆင့်ခြေထောက် စမ်းတဲ့ လူကလည်း
ဟ . . . ဆင်ဆိုတဲ့ အကောင်က အဲဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့၊ တိုင်ကြီးလိုပဲ။
နားရွက်စမ်းတဲ့ကောင်က ဆင်ဆိုတာ ပြားချပ်ကြီး၊ ယပ်တောင်ကြီးလိုပဲ ပြောတယ်။ပြောရင်း ပြောရင်း အုပ်စုချင်း ငြင်းခုံကြ၊ ရန်ဖြစ်ကြပြီး ထသတ်ကြတယ်။အဲဒီအခါမှာ ဘုရင်ကြီးက သဘောကျလွန်းလို့ ဟားတိုက်ပြီး ရယ်သတဲ့။ အတော် ကမြင်းတဲ့ ဘုရင်ပေါ့နော်။
အဲဒီမှာ မြတ်စွာဘုရားက မျက်မမြင်သူကန်းတွေဟာ ကိုယ်မြင်တဲ့အပိုင်းလေးကို ဟုတ်လှပြီဆိုပြီး အခုလို အငြင်းပွားနေကြသတဲ့။ အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင် ဆင်ဆိုသည်မှာ ဒါတွေ အားလုံးရှိတယ်ဆိုတာ သူတို့ လက်ခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင် သူ့ဟာလည်း လက်ခံမယ်၊ ငါ့ဟာလည်း လက်ခံမယ်၊ အားလုံးကို လက်ခံလိုက်ရင် ဆင်သရုပ် ပေါ်လာမှာပါတဲ့၊ မြတ်စွာဘုရားက မိစ္ဆာ၀ါဒဟာလည်း ဒီအတိုင်းပဲ၊ ခြုံငုံ မကြည့်ဘူး၊ စုံအောင် မကြည့်ဘူး၊ တစ်ဘက်အမြင်လေးနဲ့ အငြင်းပွားနေကြတယ် လို့ ဆိုလိုတယ်။
အေး . . . ဒါကြောင့်မို့ လောကမှာ မိစ္ဆာဝါဒ ဆိုတာ ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း မရှိလို့ မှားယွင်းတဲ့ ၀ါဒမျိုး ဖြစ်တယ်။ တစ်ဘက်မြင်ကိုပဲ အစွဲအလမ်းကြီးပြီး ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ‘ဣဒမေ၀ သစ္စံ၊ မောဃမညံ’ = ငါ့ဟာသာ အမှန်၊ တခြားဟာ အလကား ဆိုတဲ့ ဆိုလိုချက်တွေနဲ့ ကိုယ့် philosophy ကိုသာ အဟုတ်ထင် စွဲကိုင်ထားပြီး သူများ philosophy ကိုတော့ ပယ်ချတယ်၊ ဒီလိုနဲ့ မိစ္ဆာအယူဝါဒတွေ ပေါ်လာတယ်။အမှန်တရားဆိုတာ တစ်ခုတည်းသာရှိတယ်။အဲဒီအမှန်တရားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိလာလို့ရှိရင် ဘာမှအငြင်းပွားစရာ မရှိဘူး၊ အားလုံး အတူတူပဲ။
Posted by YATANAVASA at 9:42 AM
Labels: ဓမ္မ ဆောင်းပါး
ထိုင်ဝမ်၊ ရတနာဝါသကျောင်း စုပေါင်း ဘုံကထိန်ပွဲတော်
Posted by YATANAVASA at 5:22 PM
Labels: ပွဲတော် ဖိတ်ကြားလွှာ
ပိပ္ပလိမထေရ်သည် ဘဒ္ဒကာပိလာနီနှင့်လမ်းခွဲ၍ တစ်ပါးတည်း ကြွလှမ်းခဲ့၏။နှစ်ဦးသား လမ်းခွဲစ ဉ်က မဟာပထဝီ၏ ပဲ့တင်ထပ်မျှ မြည်ဟီးကာ တုန်လှုပ်ခြင်းကြောင့် ရှဉ့်နက်တို့ အား အစာကျွေးရာ ဝေဠုဝန်ကျောင်းတိုက်၌ သီတင်းသုံးတော်မူသော မြတ်ဗုဒ္ဓသည် ယင်း၏အကြောင်းကို သိရှိရန် ဆင်ခြင်တော်မူ၏။မရေတွက်နိုင်သော စည်းစိမ်ဥစ္စာတို့ကို စွန့်ပစ်၍ ကိုယ်တော်၏သာသနာတော်ထဲ ဝင်ရောက်လာသူ ထိုပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးအား ချီးမြှောက်မည်ဟူသောရည်ရွယ်ချက် ဖြင့် ကိုယ်တော်တိုင် သပိတ် သင်္ကန်းကိုယူဆောင်ကာ တစ်ပါးတည်းြွကတော်မူလေ၏။
သုံးဂါဝုတ်မျှ ခရီးတိုင်အောင် ကြွ၍ ရာဇဂြိုဟ်မြို့ နှင့် နာလန္ဒမြို့၏အကြား ပင်စည်နှင့်ခက်မရင်းတို့ မြေသို့ ဖြာကျအောင် ပေါက်ရောက်နေသည့် မြစ်ပွား မြစ်ထောက်များစွာရှိသော ပညောင်ပင် အရင်း၌ ထက်ဝယ် ဖွဲ့ခွေနေတော်မူ၍ ပိပ္ပလိမထေရ်အား ဆီးကြိုတော်မူ၏။ ပိပ္ပလိမထေရ်အား ဆီးကြိုရာ၌ မထင်မရှားရဟန်းတစ်ပါးအသွင် မဟုတ်ဘဲ ရှေ့နောက် ထက်အောက် ဝဲယာသို့ အတောင် (၈၀) တိုင်အောင် အဆက်မပြတ် ပြိုးပြိုးပြက်သော ရောင်ခြည်တို့ဖြင့် ဗုဒ္ဓအသွင်ကို ထင်ရှားစွာ ဆောင်တော်မူ၏။
ထိုသို့ခြောက်ဖြာသောရောင်ခြည်တို့ဖြင့် ထက်ဝယ် ဖွဲ့ခွေ နေတော်မူသော မြတ်ဗုဒ္ဓအား မြင်သော ပိပ္ပလိ မထေရ်သည် ‘ဤအရှင်ကား သုံးလောက၌ အတုမရှိ သောဗုဒ္ဓပင် ဖြစ်တန်ရာ၏။ ငါကား ဤဗုဒ္ဓကို ရည်မှန်း ၍သာ ရဟန်းပြုခဲ့ပေ၏။ ငါသည် ဆရာဖြစ်သောဗုဒ္ဓ ကိုသာလျှင် ဖူးမြင်ရာ၏။ ဗုဒ္ဓမှတစ်ပါး ငါ၏ဆရာသည် အခြားသူ တစ်စုံတစ်ယောက်မျှပင် မဖြစ်နိုင်။ ငါသည် မှန်ကန်သော အကျင့်ကို ကျင့်ကြံခဲ့၍သာ သုဂတ မည် သော ဗုဒ္ဓကို ဖူးတွေ့ရ၏။ ဗုဒ္ဓမှတစ်ပါး အခြားသော တစ်စုံတစ်ယောက်သည် ငါ၏သုဂတမဖြစ်နိုင်။ ငါသည် မဖောက်မပြန် ကိုယ်တိုင် သစ္စာတရား ကိုသိမြင်တော်မူ သော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမည်သော ဗုဒ္ဓကိုဖူးတွေ့ရ၏။ ဗုဒ္ဓမှတစ်ပါး အခြားသော တစ်စုံတစ်ယောက်သည် ငါ၏ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမဖြစ်နိုင်’ဟုဆို၍ မြတ်ဗုဒ္ဓထံသို့ ချဉ်းကပ် လေ၏။
ဤသို့ မြတ်ဗုဒ္ဓအပေါ်၌ ယုံမှားသံသယ မဖြစ်ဘဲ စိတ်ချယုံကြည်စွာ ရွှင်ကြည်သောနှလုံးဖြင့် မြင်ရာအရပ် မှပင် ရိုကျိုးသောကိုယ်ကာယဖြင့် ချဉ်းကပ်ကာ -
‘သတ္ထာမေ ဘန္တေ ဘဂဝါ၊ သာဝကော ဟမသ္မိံ - ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား၊ အရှင် မြတ်ဘုရားသည် တပည့်တော်၏ဆရာ ဖြစ်တော်မူပါ။ တပည့်တော်သည် အရှင်မြတ်ဘုရား၏တပည့်ဖြစ်ပါအံ့’ ဟု သုံးကြိမ် သုံးခါ လျှောက်ထားတောင်းပန်လေ၏။
မြတ်ဗုဒ္ဓသည် ငယ်မည်အားဖြင့် ပိပ္ပလိဟုထင်ရှား သိသော်လည်း မျိုးရိုးဂုဏ်ကို ပေါ်လွင်စိမ့်သောငှာ ‘ချစ်သားကဿပ’ဟု ခေါ်တော်မူ၏။
“ချစ်သားကဿပ၊ ချစ်သားလောက် မြင့်မြတ်စင်ကြယ်သောစိတ်ဓာတ်နှင့် ပြည့်စုံသူ တပည့် တစ်ဦးကို တစ်စုံတစ်ယောက်သော ဆရာတစ်ဦးသည် သိစရာ အားလုံးတို့ကို မသိမြင်ပါဘဲ ငါသိမြင်ပြီး၏ဟု ပြောဆို ကာ ချစ်သား၏ရိုသေလေးစားမှုကို ခံယူကာ သာယာ ငြားအံ့။ ထိုသူ၏ဦးခေါင်းသည် လည်မှပျက်ကျ၍ ခုနစ်စိတ်သော်လည်း ကွဲရာ၏။
ဤအတူ ငါဘုရား၌ပြုသော ရိုသေလေးစားမှုကို မဟာပထဝီအား ပြုမိငြားအံ့။ ထိုမဟာပထဝီ သည်လည်း ချစ်သား၏ရိုသေလေးစားမှုကို ခံယူနိုင်စွမ်းမရှိ။ ပထဝီ သည် မတည်မြဲနိုင်ပေ။ ယူဇနာပေါင်း နှစ်သိန်း လေးသောင်း မြေအထုသည် ထောင်းထောင်းကွဲအက်၍ အမှုန့်မှုန့် အညက်ညက် ပြိုပျက်ရာ၏။ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာအရာ၌ တုနှိုင်း၍ မရသော ငါဘုရားအားသာလျှင် သင်ချစ်သား၏ရိုသေမှုကို ခံယူ ခြင်းဖြင့် အန္တရာယ်မဖြစ်နိုင်။ ငါဘုရားသည်ကား သိမြင်စရာ ဟူသမျှကို သိမြင်ပြီးဖြစ်သည်။
ချစ်သား ကဿပ၊ ထိုင်ပေလော့။ သင့်အား ငါ ဘုရား၏အမွေကို ပေးအံ့။ သင်သည် ငါဘုရား၏ဝါဒ ကိုလိုက်နာပြုကျင့်ပါလော့။ ထေရနဝမဇ္ဈိမ(ရဟန်းငယ်၊ ရဟန်းလတ်၊ရဟန်းကြီး)ဖြစ်သော ရဟန်း ဟူသမျှတို့၌ တည်သည့် ထုထည်ကြီးမား မြင့်မြတ်လှသော အရှက် အကြောက်ဟူသော ဟိရီဩတ္တပ္ပ လောကပါလတရား နှစ်ပါးကို တည်စေမည်။ ပြုကျင့်ရမည်။ ကုသိုလ်နှင့်စပ်သော တရားဟူသမျှကို နာကြားရမည်။ ထိုကုသိုလ် အကုသိုလ်ကို လိုလားသောအားဖြင့် ဤတရား သည်ကား ငါ၏ဥစ္စာအကျိုးသာတည်း။ စိတ် ၌ သွင်းထား၍ အနည်းငယ်မျှ ပြင်ပသို့ မထွက်စေဘဲ ကောင်းစွာ အထပ်ထပ်ဆောင်သောစိတ်ဖြင့် ငါဘုရား ဟောကြားသောတရားကို အာရုံစူးစိုက်၍ နာယူလော့။ အသုဘ၊ အာနာပါနတို့၌ ပထမဈာန်အလိုအား ဖြင့် သုခနှင့်ယှဉ်သော ကာယဂတာသတိကို မစွန့်အံ့ ဟု ပြုကျင့်ရမည်။ ချစ်သားကဿပ ငါဘုရား၏ ဤ သုံးဝသော ဩဝါဒကို လိုက်နာကျင့်သုံးပါလော့”
ဤတွင် ရှင်မဟာကဿပမထေရ်သည် မြတ်ဗုဒ္ဓ ၏သုံးပါးသောဩဝါဒကိုခံယူတော်မူ၍ ရှင်ရဟန်း အဖြစ် ထမြောက် အောင်မြင်ခဲ့ပေ၏။ မြတ်ဗုဒ္ဓသည် မထေရ် မြတ်အား သုံးပါးသောဩဝါဒဖြင့် ဆုံးမ၍ ရဟန်းအဖြစ်ကို ပေးတော်မူပြီးသော် ပညောင်ပင်အရင်းမှထွက်ခွာ တော်မူ၏။ ယင်းသို့ ထွက်ခွာရာ၌ မထေရ်မြတ်အား ပစ္ဆာသမဏ(နောက်ပါရဟန်း)ပြု၍ ကြွတော်မူ၏။ သုံးဂါဝုတ်မျှ ခရီးရောက်သောအခါ တစ်ခုသော သစ်ပင်ရိပ်သို့ဝင်၍ ခေတ္တနားလိုသည့်ဟန်ကို ပြတော် မူ၏။ မထေရ်မြတ်လည်း မိမိပခုံးထက်၌ ပါလာသော အသပြာတစ်ထောင်ထိုက်သည့် ဒုကုဋ်သင်္ကန်းကို လေး ခေါက်ပြု၍ ခင်းပေးတော်မူ၏။ မထေရ်မြတ် ခင်းပေးအပ်သော ဒုကုဋ်သင်္ကန်းပေါ်၌ ထိုင်ပြီးသော် လက်တော် ဖြင့် သင်္ကန်းစွန်းကို သုံးသပ်၍ မိန့်တော်မူ၏။
“ချစ်သား ကဿပ၊ သင်၏ ဒုကုဋ်သင်္ကန်းသည် နူးညံ့လှပေစွ”
မထေရ်မြတ်လည်း ‘မြတ်စွာဘုရားသည် ငါ၏ ဒုကုဋ်သင်္ကန်း နူးညံ့ခြင်းကို ချီးကျူးတော်မူ၏။ ဝတ်ရုံ တော်မူလိုသည်ဖြစ်အံ့’ဟု ကြံ၍
“မြတ်စွာဘုရား၊ တပည့်တော်၏ဒုကုဋ်သင်္ကန်းကို ဝတ်ရုံတော်မူပါ”ဟု လျှောက်ထား၏။
“ချစ်သားကဿပ၊ ငါဘုရားအား လှူဒါန်းလိုက်သည်ရှိသော် သင့်အတွက် အဘယ်ဒုကုဋ် သင်္ကန်းကို ဝတ်ရုံမည်နည်း”
“အရှင်ဘုရား၏သင်္ကန်းတော်ကို ရလျှင် ဝတ်ရုံပါမည်”
မြတ်ဗုဒ္ဓသည်လည်း ကိုယ်တော်၏ပခုံးထက်၌ ပါလာသော ဒုကုဋ်သင်္ကန်းကိုပြတော်မူလျက် -
“ချစ်သား၊ ငါဘုရား သုံးဆောင်ဝတ်ရုံထားသဖြင့် ဟောင်းနွမ်းနေပြီဖြစ်သော ဤ ဒုကုဋ်သင်္ကန်းကို ဝတ်ရုံ နိုင်ပါမည်လော။ ဤသင်္ကန်းသည် ပုဏ္ဏာမည်သော ကျွန်မ၏အလောင်းကို ထုတ်၍ စွန့်ပစ်ထားရာ သုသာန်သို့ ဝင်ရောက်ကာ တစ်ပြည်မျှလောက်သော ပိုးလောက် ပိုးရွတို့ကို ခါထုတ်၍ မြတ်သောအရိယာတို့၏ အကျင့်၌ တည်ကာ ပံ့သကူအဖြစ် ကောက်ယူခဲ့၏။ ဤသင်္ကန်း ကို ကောက်ယူသည့်နေ့၌ပင် မဟာပထဝီမြေကြီးသည် မြည်ဟီး တုန်လှုပ်ခဲ့ပေ၏။ ကောင်းကင် အာကာဝဠာ သည်လည်း မိုးထစ်ချုန်းသံဖြင့် ဟိန်းဟိန်းညံခဲ့ပေ၏။
စကြဝဠာတိုက်တစ်သောင်းမှ နတ်ဗြဟ္မာတို့သည်လည်း ကောင်းချီးဩဘာပြုကာ သာဓု အနုမောဒနာ ခေါ်ဆိုခဲ့ ကြပေ၏။ ငါဘုရား၏ သင်္ကန်းကို ခံယူသော ရဟန်းသည် သာမညမျှ သီလ သမာဓိ ရှိရုံနှင့် မထိုက်တန်။ ဇာတိ ပံသုကူလိက (ရဟန်းပြုသည်မှစ၍ ပံ့သကူသင်္ကန်း ဆောင်သူ)၊ ဇာတိအရညိက (ရဟန်းပြုသည်မှ စ၍ တော၌နေသူ)၊ ဇာတိဧကာသနိက (ရဟန်း ပြုသည်မှ စ၍ တစ်နေရာတည်း၌ စားသုံးသူ)၊ ဇာတိသပဒါန စာရိက(ရဟန်းပြုသည်မှစ၍ အိမ်စဉ်အတိုင်း ဆွမ်းခံ လှည့်လည်သူ)ဟူသောဂုဏ်တို့နှင့် ပြည့်စုံသော ရဟန်းသည်သာလျှင် ငါ၏သင်္ကန်းကို ခံယူထိုက်၏။ ချစ်သား၊ ငါ၏သင်္ကန်းနှင့် ထိုက်တန်အောင် ကျင့်ဆောင် နိုင်ပါမည်လော”
ရှင်မဟာကဿပမထေရ်ကား အလွန်တရာမှ ပြု နိုင်ခဲလှစွာသောအမှုကို မတွန့်မရွံ့ဘဲ မြတ်ဗုဒ္ဓအထံ၌ ကတိကဝတ်ပြုဘိ၏။ဤအမှု ဤအကျင့်သည် သာမန် ရဟန်းတော်များပင် ပြုနိုင်ကျင့်နိုင်ခဲလှ၏။ ဤမထေရ် မြတ်ကား ယင်းပြုနိုင်ခဲ ကျင့်နိုင်ခဲလှသည့်အမှုကို ကြီး လေးသောဝန်ဆောင်မှုတစ်ရပ်ပင် မထင်။ ဤသို့သော တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နိုင်ရန်အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ဒုကုဋ် သင်္ကန်းကို ခံယူနိုင်ရန်အတွက် ကမ္ဘာတစ်သိန်းပတ်လုံး ကျင့်ကြံခဲ့ရသည် မဟုတ်ပါလား။
ထိုသို့ သုံးလောက၌ အထွတ်အမြတ်များ ဖြစ်ကြသော မြတ်ဗုဒ္ဓနှင့် တပည့်သာဝကကြီးတို့ သင်္ကန်း လဲလှယ်ခြင်းအမှုကိုပြုရာ၌ မဟာပထဝီသည် ပဲ့တင်ထပ်မျှ မြည်ဟီးတုန်လှုပ်ခြင်းကို ပြုလေပြန်၏။ မြတ်ဗုဒ္ဓသည် တပည့်သာဝကကြီးနှင့် သင်္ကန်းးလဲလှယ်ခြင်းအမှု၌ ရှေးဘုရားရှင်တို့ပင် မပြုခဲ့ဖူးသော ပြုမူခြင်းတစ်ရပ် ဖြစ်ပါ၏။ ဤ မထေရ်မြတ်ကြီးသည်ကား မြတ်ဗုဒ္ဓကိုယ်တော်တိုင် ဒုကုဋ်သင်္ကန်းကို ချီးမြှောက်ခြင်း ခံရသည်မှာ ထူးခြားမြင့်မြတ်သောကြောင့်သာ ဖြစ်၏။
Posted by YATANAVASA at 11:37 AM
သာကီဝင် မြန်မာ (ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကို ကုလားလို့ပြောနေကြသူများအတွတ်)
သူတို့ဟာ ကပိလဝတ်၊ ဒေဝဒဟ၊ ကောလိယ စတဲ့ သကာကီဝင်တွေရဲ့ သက္ကတိုင်းဟာ မျက်မှောက် ခေတ် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်း မဟုတ်ပဲ နီပေါနိုင်ငံမှာ ဆိုတာတောင် မသိပဲ ပြောဆိုနေကြတယ်။
သာကီဝင်မင်းသားက ဘုရားဖြစ်လာတဲ့ ဗုဒ္ဓနဲ့ သာကီဝင်တွေရဲ့ သမိုင်းကြောင်းကို သေခြာ မဖတ်ဘူးတော့ သူများပြောတာ ဟုတ်လိမ့်နိုးနိုး ဖြစ်ကုန်ကြတာပေါ့။ (အဲသလို ဘူမသိ ကိုးမသိ သူများပြောတာ ဟုတ်လိမ့်နိုး ထင်နေရင် သူများ လိမ်ညာတာ ခံရနိုင်ပါတယ်) ဗုဒ္ဓနှင့် သူ့ဆွေတော် မျိုးတော် သက္က ဆိုတဲ့ သာကီဝင် တွေရဲ့ သမိုင်းကတော့ . . .။
၁။ သာကီဝင်တွေ ဖြစ်လာမယ့် ဥက္ကာကရာဇ်မင်းကြီးရဲ့ သားတော်လေးပါး၊ သမီးတော် ငါးပါး နဲ့ နောက်လိုက်နောက်ပါများဟာ မဇ္ဈိမဒေသသားများမဟုတ် (ယနေ့နီပေါနိုင်ငံနဲ့ အိန္ဒိယနယ်စပ်ဒေသ က ဒေသခံတွေမဟုတ်ပဲ) အလွန်ရှေးကျတဲ့ကာလက အလွန်ဝေးကွာတဲ့ဒေသမှ ရွှေ့ပြောင်း ဝင်ရောက်လာသူများ ဖြစ်တယ်။
၃။ သကျ သာကီဝင်တွေ ဘယ်အရပ်ကလာတာလဲလို့ မဇ္ဈိမဒေသက အာရိယံ၊ ဒြာဗီဒီယန် တွေက မေးကြတယ်။ သာကီဝင်တွေက ပြန်ဖြေတယ်။ သူတို့ဟာ အရှေ့ အရပ်က လာကြတာပါ တဲ့။ အရှေ့ အရပ်ဆိုတာ သေခြာအောင် “ကပိလဝတ်မှ ကြည့်လျှင် နေထွက်ရာ အရပ်ဟာ သာကီဝင်တွေရဲ့ ဇာတိ ပါ” တဲ့။
၅။ နောက်တစ်ချက်က နောင် သာကီဝင်ဖြစ်လာမယ့် သူတွေဟာ “ကျွန်းတောကြီး ” တွေ ရှိတဲ့ အရပ်က လာကြတာပါတဲ့။ သူတို့ဟာ ဟိမဝန္တာတောင်ခြေကို ပတ်ပြီး ရွှေ့ပြောင်းလာကြတာ ကျွန်းတောကြီးတွေ ရှိတဲ့ဒေသကို ရောက်တယ်။ ဇာတိမြေနဲ့ တူသမို့ တိုင်းနိုင်ငံ ထူထောင်ပြီး နေကြတယ်။ ကပိလ ရသေ့ကြီး ကလည်း မြို့တည်ဖို့ နေရာကို ပေးတယ်။ “သာကဝန=ကျွန်းတော” ကြီးမှာ ရှိတဲ့ နိုင်ငံမို့ သာကပြည်လို့လဲ ခေါ်ကြတယ်။
၆။ ၁၉၅၈ အိန္ဒိယ ရှေးဟောင်းသုတေသနရဲ့ ကပိလဝတ်၊ ဒေဝဒဟ မြို့ဟောင်းများ တူးဖော်မှု အစီရင်ခံစာအရ သာကီဝင်တွေဟာ အနောက်ဘက်က ဝင်လာတဲ့ အာရိယံ တွေလုံးဝ မဟုတ်ပါ ဘူးတဲ့။ သာကီဝင်တွေဟာ တိဘက်မြန်မာ ခေါ် တိဘက်တိုဘားမင်း အုပ်စုဝင်တွေ ဖြစ်ပါသတဲ့။ (သာကီဝင်တွေဟာ တိဘက်တိုဘားမင်း အုပ်စုဝင်ဖြစ်ကြောင်း အခြား အထောက်အထား များစွာ ရှိပေမယ့် စာရှည်လွန်းလို့ ဤမျှသာ။)
၉။ ဘီစီ ၉၀၀ ခန့်က ကပိလဝတ်မှ အဘိရာဇာခေါင်းဆောင်တဲ့ သာကီဝင် အုပ်စု တစ်စုဟာ သူတို့ ဇာတိဖြစ်တဲ့ သင်္ဃဿ (တကောင်း) ကို ပြန်လည် ရွှေ့ပြောင်းလာကြတယ်။ စစ်အင်အား ကြီးတဲ့ အာရိယံကုလားဖြူ မင်းက သမီးတောင်းတာ မပေးလို့၊ အင်အားခြင်းလည်း မယှဉ်နိုင်လို့ ဇာတိ တကောင်းကို ပြန်ပြေးလာရခြင်းဖြစ်တယ်။ (ဒါကို သာကီဝင်တွေ ပထမအကြိမ် တကောင်းကို ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်မှု လို့ခေါ်တယ်။)
၁၀။ ဘီစီ ၅၄၀ ခန့်မှာ ဓဇရာဇာ ဦးဆောင်တဲ့ သာကီဝင် အုပ်စုတစ်စုဟာ သူတို့ဇာတိ တကောင်းကို ပြန်ပြေးလာရပါတယ်။ ဝိဋဒူပ မင်းသားက (genocide) လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်လို့ ထွက်ပြေး လာရတာ ဖြစ်တယ်။
ဗုဒ္ဓရဲ့ ဘိုးတော်၊ ဘေးတော် သာကီဝင်များရဲ့ ဇာတိဟာ မြန်နိုင်ငံဧရိယာတွင်း ဖြစ်သမို့ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ထွန်းကား သလားလို့ တွေးထင်မိတယ်။
ကိုင်းဒီတော့ မြန်မာတွေနဲ့ သွေးသားရင်း ဖြစ်တဲ့ သာကီဝင်မင်းသားကနေ ဘုရားဖြစ်သွားတဲ့ ဗုဒ္ဓဟာ မြန်မာတွေအတွက် သွေးရင်းသားရင်းပါ။
အကိုးအကား။ ။ ဦးလှသိန်းထဋ် (ဘီအေ၊ ဓမ္မာစရိယ) ၏ ဗုဒ္ဓနှင့် မြန်မာလူမျိုး မင်းကွန်း ဆရာတော် ဦးဝိစိတ္တသာရာ ဘိဝံသ ရဲ့ မဟာဗုဒ္ဓဝင်များ
တောင်ပေါက်ဆရာတော်ရဲ့ ဗုဒ္ဓသာသနိက ပဌဝီကျမ်း
သိသာမြင်သာစေရန် နေဝါရီ သာကီဝင် နွယ်များ ဓာတ်ပုံဖြင့် ပြသလိုက်ပါသည် ရုပ်တွေက မြန်မာနဲ့ ဆင်လား အိန္ဒိယနွယ်ဖွားနဲ့ဆင်လား။ ကြည့်ခိုင်းလိုက်ပါ။ ....
ရုပ်တူတာတင်မက နေဝါရီဘာသာ စကားမှာ မြန်မာစကားနဲ့ တူတာတွေ အများကြီးပါပဲ ...။.
ဂဏန်းသချာင်္ ၅=ငါး ကို ငါး လို့ပဲခေါ်တယ်။ မီး ကို မီး။ ပူတာကို ပူတာ။ ထိတာကို ထိတာ မီးပူဆိုတာကို မီးပူ။ နောက် မေးခွန်းမှန်သမျှ လား ပါတယ်။ အငြင်းဝါကျမှန်သမျှ အရှေ့မှာ `မ´ ထည့်ပြီးပြောတယ်။
အာလူး ကို အာလူး ပဲခေါ်တယ်။ ၀ရံတာ ကို ၀ရံတာ လို့ပဲခေါ်တယ်။ ရေထဲ က ငါး ကို လည်း ငါး လို့ပဲ ခေါ်တယ်။ နေ၀ါရီ လူမျိူးနှင့် မြန်မာလူမျိူးတ်ို့တူသော နောက်ထပ်စကားချို့ရှိပါသေးတယ်...။
လမ်း ကို လမ်း။ သွားသည်ကို လျှောက် ။ သောက်သည်ကို သောက်။ အခေါင်းကို ခေါင်း။
နှခေါင်းကို နှာ။ မျက်စိကို မျက်။
မြတ်ဗုဒ္ဓကို ကိုယ်းကွယ်သူ စည်းကပ်သူအများစုဟာ မျက်နှာဝိုင်းမျိူးများဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့လူမျိူးကြီး များဖြစ်တဲ့ ရာဝေရီယာန် မွန်ဂိုလီယာန် အင်ဒိုအာရီယာန်စတဲ့ သုံးမျိူး အနက်ထဲက အင်ဒိုအာရီယာန် ကုလားလူမျိူး မဟုတ်တာသေချာတယ်...။
ကျန်တဲ့စကား လုံး အသုံး အနှုန်း တွေ တူတာ တွေ အများကြီး ကျန်သေးတယ်။ နီပေါနိုင်ငံမှာ နေပါလီ လူမျိုးနဲ့ နေဝါရီ လူမျိုးဆိုပြီး လူမျိုး ၂ မျိုးရှိတယ်။ နေပါလီ က ပုဏ္ဏား ဗြဟ္မာဏ မျိုးဖြစ်ပြီး နေဝါရီ လူမျိုးက သာကီဝင် မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
အခုပြထားတဲ့ပုံက နေဝါရီ မိန်းကလေးတွေပုံပါ။ နေဝါရီ လူမျိုးအုပ်စုသည် တိဘက်တိုဘားမန်း အုပ်စုဖြစ်ပါသည်။ ကုလားမျိုး အာရီယာန်နွယ်မဟုတ်ပါ။ သိသာမြင်သာစေရန် ဓာတ်ပုံ တင်ပေး လိုက်တာပါ။
Posted by YATANAVASA at 10:47 AM
"ရဟန်းသံဃာတော်များသည် ၀ဲဘက်ပုခုံးကို သင်္ကန်းတော်ဖြင့် ဘာ့ကြောင့် ဖုံးလွှမ်းရသနည်း"
မြတ်ဗုဒ္ဓ သာသနာမှာ လက်ဝဲတော်ရံ လက်ယာတော်ရံဆိုတာရှိတယ်။ လက်ဝဲတော်ရံဆိုတာ တန်ခိုး အရာမှာ ဧတဒဂ်ရတဲ့ အရှင်မဟာမောဂ္ဂလာန်ပါ လက်ယာတော်ရံဆိုတာ ပညာအရာမှာ ဧတဒဂ်ရတဲ့ အရှင်သာရိပုတ္တရာပါ။
တန်ခိုးက လက်ဝဲ၊ ပညာက လက်ယာ။ တန်ခိုးဆိုတာ အာသဝေါတရားတို့ရဲ့ ကုန်ရာခန်းရာ အရဟတ္တဓဇ၊ အရဟတ္တရဲ့ အလံတံခွန်သာဖြစ်တယ်။
ပညာဆိုတာကတော့ ၀ိပဿနာပညာ၊ မဂ်ပညာ၊ ဖိုလ်ပညာကနေ နိဗ္ဗာန်ကို ရဖို့ ရောက်ဖို့ပါ။
ပုထုဇဉ်တို့ရဲ့ စိတ်သဘာဝဆိုတာ အဆန်းကြိုက်၊ တစ်ခုရိုး တစ်မျိုးပြောင်းပြီး။ တစ်သံသရာလုံး ဆန်းတယ်ထင်တာတွေ နောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။ ရိုင်းရိုင်းပြောရရင် လမ်းဘေးက မျောက်ပွဲ၊ မျက်လှည့်ပွဲကအစ ဆန်းတယ်ထင်တာ မှန်သမျှမှာ လူတွေမေ့မျော သာယာနေတတ်ကြတယ်။
ဒီတော့ တန်ခိုးရဲ့ဆန်းဆန်းပြားပြား ဖမ်းစားမှုအပေါ် မေ့လျော့တွေဝေ သာယာနေကြရင် မဂ်ပညာ ဖိုလ်ပညာကွယ်မှာပဲ၊ မဂ်ပညာ ဖိုလ်ပညာကွယ်ရင် သာသနာကွယ်မှာပဲ။ သာသနာကွယ်ပြီ ဆိုတာနဲ့ သတ္တ၀ါတွေရဲ့ သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲ ဒုက္ခအပေါင်းက လွတ်မြောက်ရာတရားတွေလည်းကွယ်တာပဲ။
ယောဂီတို့ တရားထိုင်ရာမှာလည်း တင်ပျဉ်ခွေကြား လက်နှစ်ဖက် ယှက်တင်တဲ့အခါ လက်ဝဲ လက်ကို အောက်က လက်ယာလက်ကို အပေါ်က ထားရတာလည်း ဒီသဘောပဲ။
လက်ဝဲဆိုတဲ့ တန်ခိုးသဘောကို လက်ယာဆိုတဲ့ ပညာက ဖုံးထားအုပ်ထား၊ ဆင့်ထားရတယ်။
တစ်နည်းအားဖြင့်တော့ လက်ဝဲက သမထ၊ လက်ယာက ၀ိပဿနာ။ သမထ တန်ခိုးကိုသာ ပြလိုက်လို့ကတော့ အညှီ ယင်အုံသလို နေတော့မှာပေါ့။
ရုပ် နာမ် ဖြစ်ပျက်တွေ အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တတွေ ဘာမှဟောလို့ပြောလို့ နားဝင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ တန်ခိုးပြမိရင် တန်ခိုးပဲ ကိုးကွယ်မှာ။ ၀ိပဿနာပညာ၊ ဖိုလ်ပညာ၊ မဂ်ပညာတွေဆိုတာ ကျင့်ကြံ အားထုတ်ရမှန်းတောင် သိမှာမဟုတ်တော့ဘူး။
တန်ခိုးလောက်ရင် မိန်းမောနေရင် သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲကမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူး။ ဒါ့ကြောင့်တန်ခိုး ဆိုတာ ဖုံးထားအပ်သောအရာ၊ ပညာသာလျှင် အမြဲအစဉ် ဖွင့်ထားအပ်သောအရာ၊ ဖော်ထား အပ်သော အရာ၊
ဒါကြောင့် တန်ခိုးကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ လက်ဝဲဘက်ကို သင်္ကန်းနဲ့ ဖုံးထားရတယ်။ ပညာကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ လက်ယာဘက်ကိုတော့ ဖွင့်ပြထားရတယ်၊ ဖော်ထားရတယ်။
Posted by YATANAVASA at 12:27 PM
ထိုင်ဝမ်၊ ရတနာဝါသကျောင်း၊ မြန်မာနှစ်သစ်ကူး သင်္ကြန်ပ...
dogecoin daily charts